Contractor တွေကိုအထောက်အကူပြုနိုင်မယ့် Builk Myanmar - BUILK Myanmar
Contractor တွေကိုအထောက်အကူပြုနိုင်မယ့် Builk Myanmar
It ပိုင်း (သို့မဟုတ်) Digital ပိုင်းတွေ ခေတ်စားနေတဲ့ခေတ်မှာ ငွေကြေးထိန်းချုပ်မှုနဲ့ Management ပိုင်းကို နည်းစနစ်ကျကျ လုပ်နိုင်ဖို့အတွက် Builk Myanmar က ကူညီပေးနိုင်ပါတယ် ။ Builk Software က Construction လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသူများနဲ့ Contractor တွေအတွက်ပိုပြီးအသုးံဝင်စေမယ့် Software လေးပဲဖြစ်ပါတယ် ။
Construction တစ်ခုရဲ့ Management ပိုင်းကနေစပြီး Construction ရဲ့ Project တစ်ခုလုးံကိုတိကျမှန်ကန်စွာနဲ့ အကျိုးရှိမယ့် အချိန်တွေကို အလေအလွင့်မရှိအောင် ထိန်းချုပ်ပေးနိုင်မယ့် Software တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ် ။Website ဖြစ်တဲ့အတွက် Builk ကိုအသုးံပြုရန် လွယ်ကူစေပါတယ် ။
ရှေးသမရိုးကျအတိုင်း စာရင်းတွေနဲ့ Report တွေကို စာရွက်စာတမ်းတွေနဲ့ အလုပ်လုပ်နေမယ့်အစား Digital စနစ်နဲ့ ပြောင်းလဲပြီး အချိန်ကိုအကျိုးရှိစွာ အသုးံချလိုက်ပါ ။ Construction တစ်ခု လုပ်တော့မယ် ဆို ရင် Project ကိုစဆွဲ မယ် သုးံစွဲမယ့် Charges ကိုလည်းပုံသေတစ်ခုအနေနဲ့ Target ထားမယ် ……….. Construction ထဲမှာ ရှုံးနေပြီဆိုပါစို့ ဘယ်နေရာမှာ ရှုးံနေလည်းအတိအကျသိဖို့ဆိုတာ လွယ် ကူတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ပါဘူး ………ကဲ ဒါပေမယ့် ခုတော့ Builk Myanmar ရှိလာပြီဆိုတော့ ဒါတွေကိုစိတ်ပူစရာမလိုတော့ပါဘူး။
လူကြီးမင်းရဲ့ လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ Target ထားထားတဲ့ ငွေ amount ထက် ပိုပြီးကုန်နေတယ် …ဘယ်နေရာမှာပိုသုးံထားမိလဲ ??
….အဲ့ဒါတွေကို အချိန်နဲ့ တစ်ပြေးညီ သိရှိနိုင်တယ် ( စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းပေါ့ ) ….ဒါကတော့ Construction သမားတွေအတွက် အသုးံဝင်စေမယ့် နည်းလမ်းလေးတစ်ခုကို ပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ် ကျန်တဲ့ ကောင်းကွက်တွေကတော့အများကြီးရှိနေပါသေးတယ် ။
ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကို ပိုပြီး စနစ်ကျ စေ မယ့် Builk Myanmar
Builk Myanmar ကContractor တွေကိုဘယ်လိုအကျိုးပြုစေမှာလည်း
-လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ Construction ထဲက Workflow တွေပိုမြန်လာစေမယ် ၊ အရင်ကထက်ပိုပြီး စနစ်ကျလာမယ်
-Report System တွေကိုလည်းအချိန်နဲ့ တစ်ပြေးညီသိရှိလာမယ်
-အရှုံးအမြတ်စာရင်းတွေကိုလည်းတိတိကျကျနဲ့ လိုအပ်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာ လိုအပ်သလို ထုတ်ကြည့်နိုင်မယ်
– ငွေကြေးဖောင်းပွမှုတွေကိုလည်း လျှော့ချပေးနိုင်မယ်
-Paperless ကိုလည်းလျှော့ချ ပေးနိုင်မယ်
-Company Profile ကိုလည်း SEO မှာထည့်ပေးထားမှာမို့လို့ Website မှာအလွယ်တကူရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်မယ်……စတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်………………………
အပိုငွေကုန်ကျမှုနဲ့ management ပိုင်းကို ထိန်းချုပ်လိုက်ပါ
Management ပိုင်းမှာရောဘယ်လိုအားသာချက်တွေရှိလဲ ?
ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုမှာငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စတွေကို Management ကျကျကိုင်တွယ်နိုင်မှုကလည်း အရှုးံအမြတ်ပေါ်မှာမူတည်နေပါတယ် ။ ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုတွေကို ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်း အချက်အလက်တွေပေါ်ကိုးကားပြီး ဆုးံဖြတ်ချင်တယ် …..စာရင်းတွေ ၊ Report တွေကိုစာရွက်စာတမ်းတွေအများကြီး ထက်ဆိုင်ရင်ကိုယ့်အတွက်အသုးံဝင်စေမယ့်လုပ်ငန်းရဲ့အချက်အလက်တွေကိုပဲ တိတိကျကျ လိုချင်တယ်ဆိုရင် ….. လွယ်ပါတယ် ဒီပြဿ တွေကို Builk Software ရှိနေတဲ့အတွက် အချိန်ကိုလည်းအကျိုးကျိုးရှိရှိ အသုးံချနိုင်မယ် တိကျတဲ့အဖြေကိုလည်း ရရှိမယ် ။ ကဲဒါဆိုရင်တော့ လူကြီးမင်းရဲ့ Construction Project တစ်ခုလုးံကို အပိုငွေကုန်ကျမှုကိုလုးံဝ မရှိအောင်ထိန်းချုပ်ပြီး လူကြီးမင်းရဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခုလုးံကို Builk Myanmar နဲ့ Digital စနစ်သို့ပြောင်းလဲလိုက်ပါ ။
လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ Construction လုပ်ငန်းတစ်ခုလုးံကို Builk Myanmar နဲ့ Digital စနစ်ကို ပြောင်းလဲ ဖို့စိတ်ဝင်စားတယ် ဆိုရင် တော့ Builk Myanmar ရုံးမှာ အပတ်စဉ် Workshop လေးပြုလုပ်နေပါတယ် ။
Workshop ရှိတဲ့ရက် ကလေးတွေကို Builk Myanmar ရဲ့ Page မှာ ကြော်ငြာလေးတွေတင်ပေးပါတယ် ။ တက်ရောက်ဖို့အစီအစဉ်ရှိရင်တော့ Register လေးသွင်းပြီး တက်ရောက်ဖို့ကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ် ။
အမှတ် ၁ ၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း ၊
ရွှေဂုံတိုင် Excel Tower ရှေ့ ၊ ရွှေတောင်ကြားရပ်ကွက်
ဗဟန်းမြို့ နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့ 
09 250 348 350 , 09 794 211 572သို့ဆက်သွယ်၍လည်း Builk Myanmar အ ကြောင်းကိုအသေးစိတ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ် ။